Mpizaha tany manaparitaka Coronavirus: Gorillas sy Chimpanzees atahorana?
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Mpizaha tany manaparitaka Coronavirus: Gorillas sy Chimpanzees atahorana?
gorila ao rwanda
Gorila Mountain ary ny chimpanzees dia ampahany lehibe sy manintona amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Rwanda, Oganda, Tanzania, ary Kongo. Manahy ny mpiaro ny tontolo iainana any Afrika raha mahita ireo Gorillas Mountain sy Chimpanzees any Afrika tratran'ny Covid-19 amin'ireo olona mitsidika toeram-ponenan'ireo primatiora any Afrika Atsinanana sy Afovoany.
The Tahiry manerantany momba ny natiora (WWF) vao haingana dia nampitandrina ny amin'ny mety hiparitahan'ny Covid-19 amin'ireo gorila Mountain mipetraka any Rwanda, Uganda, Kongo, ary ny faritra ala ekoatera iray manontolo ao Afrika.
Satria mamindra olona betsaka kokoa manerantany ny viriosy, dia mampitandrina ny mpiaro ny tontolo iainana fa mety hitranga ny gorila any an-tendrombohitra tandindonin-doza.
Hafa noho ny gorila Mountain, ny vondrom-piarahamonina Chimpanzee any Western Tanzania, Uganda, ary ny faritra afovoany Afrika Afovoany dia isaina ho tandindonin-doza ihany koa noho ny tratran'ny aretina Covid-19.
WWF dia nampitandrina fa ny primata dia mizara ADN amin'ny olombelona amin'ny 98 isan-jato, ary nilaza fa tandindomin-doza ireo biby ireo noho ny fihanaky ny aretina coronavirus.
Ny valan-javaboarin'i Virunga National ao Kongo sy Rwanda mpifanila vodirindrina aminy dia samy nanidy ny mpizahatany hiaro ny gorila. Tsy nanidy ny fizahan-tany gorila i Oganda, fa ny fidinana mpitsidika iray kosa dia nametra ny fivezivezena olona tao anaty vala.
Ny isan'ny gorilazy an-tendrombohitra dia nitombo hatramin'ny 1,000 mahery tato anatin'ny taona vitsivitsy taorian'ny fanentanana mahomby amin'ny fiarovana mandritra ny 30 taona lasa, miaraka amin'ny isan'izy ireo.
Ny primatologist malaza any Afrika Jane Goodall dia naneho ny ahiahiny amin'ny mety hiparitahan'ny areti-mandringana Covid-19 avy amin'ny olona ka hatrany amin'ny primata.
Nilaza izy tany London fa andro vitsy lasa izay fa ny rajako lehibe dia mora tohina noho ny aretin'ny taovam-pisefoanan'olombelona. Ao amin'ny toeram-pialofana ho an'ny chimps kamboty, ny mpiasa dia mitafy fitaovam-piarovana ho fisorohana ny COVID-19.
gorila tendrombohitra any Afrika
"Mampiahiahy lehibe izany satria tsy afaka miaro ireo chimps rehetra manerana an'i Afrika isika ary raha vantany vao tafiditra ao aminy ny viriosy, ary mivavaka aho fa tsy hitranga izany, dia tsy fantatro izay tokony hatao," hoy i Jane.
Rwanda koa dia manidy vonjimaika ny fizahan-tany sy ny asa fikarohana ao amin'ny valan-javaboary telo izay fonenan'ireo primata toa ny gorila sy ny chimpanzees.
Ireo gorila any an-tendrombohitra dia mora voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana mampijaly ny olombelona. Ny sery mahazatra dia mety mamono gorila, hoy i WWF, antony iray tsy avela hanakaiky ny mpizahatany amin'ny ankapobeny ny gorila.
Gorila tendrombohitra 1,000 eo no monina any amin'ny faritra arovana any Kongo, Oganda, ary Rwanda. Ny famelana ny besinimaro hitsidika ireo faritra ireo dia zava-dehibe sy mahasoa. Na izany aza, ny COVID-19, ilay aretina ateraky ny coronavirus, dia nahatonga ny tompon'andraikitra tao amin'ny valan-javaboary Virunga nanafatra ny fandrarana vonjimaika.
Tsy nanambara ny fanakatonana ny fizahantany zaridaina gorila i Oganda. Na izany aza, ny isan'ny mpitsidika avy any Eropa sy ny toerana hafa dia nihena be, nahatonga ny valan-javaboary tsy nisy mpizahatany betsaka.
Nangataka an'izao tontolo izao i Guam mba hanome fotoana antsika amin'ny hetsika fanentanana vaovao
Fihenan'ny loza eo amin'ny tsenan'ny fiaramanidina